एउटै पेटका दाजु बहिनीले विवाह गर्न लागेपछि आमाले दिइन् प्रहरीमा उ’जु’री, प्रह’रीसंग भने `स’ म्प’र्क गरिसक्यौ´ – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Intresting/एउटै पेटका दाजु बहिनीले विवाह गर्न लागेपछि आमाले दिइन् प्रहरीमा उ’जु’री, प्रह’रीसंग भने `स’ म्प’र्क गरिसक्यौ´
एउटै पेटका दाजु बहिनीले विवाह गर्न लागेपछि आमाले दिइन् प्रहरीमा उ’जु’री, प्रह’रीसंग भने `स’ म्प’र्क गरिसक्यौ´
2,217 Less thanaminute
काठमाडौ । पछिल्लो समय समाजमा सोच्नै नसकिने घ’ट’ना हुन थालेका छन् । सोलुखुम्बुमा फेरी एउटा यस्तै घ’ट’ना सार्वजनिक भएको छ । एउटै आमाको पे’ट’वाट जन्मिएका दाजु बहिनीले बिबाह गर्न लागेको भन्दै आमाले प्र’ह’रीको सहयोग मागेकी छन ।
आमाले आफ्ना छोराछोरीले विवाह गर्न लागेको भन्दै प्रहरीमा उ’जुरी दिएपछि उनीहरु प’क्रा’उ परेका छन् । बुधबार जिल्लाको महाकुलुङ गाउँपालिकाबाट २३ वर्षीय दाजु र १९ वर्षीय बहिनीले यस्तो गल्’ती गर्न लागेपछि आमाले दिएको उ’जु’रीको आधारमा उनीहरुलाई प’क्रा’उ गरिएको छ ।
प्रहरीका अनुसार दाजु बहिनीले प्रारम्भिक सोधपुछमा बिबाह नै गर्न लागेको स्वीकार गरेका छन् । उनीहरुले बिबाह गर्ने र आवश्यक परे गाउँ नै छाड्ने सहमतिमै यौ’न स’म्प’र्क समेत गरेको प्रहरी सामु बताएका छन्। उनीहरु लाई प’क्रा’उ गरेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय ल्याईंदैछ। अहिले दुवै जनालाई प’क्रा’उ गरेको र हा’ड/ना’ता क’र’णीमा मु’द्दा चलाउने प्र’हरीको तयारी छ। यसअघि स्था’नी’य स्त’र’मा समेत छलफल भएको थियो। ****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
मात्र एक रात भिजाएर मेथी दाना सेवन गर्नाले हुन्छ ग्यास्ट्रिक चट !
घरमा भूलेर पनि नराख्नुहोस् यी ६ चीज, मानिन्छ निकै अशुभ
ज्योतिष शास्त्र : कुन महिनामा जन्मिएका महिलाको स्वभाव कस्तो हुन्छ ?
बिहान उठ्न साह्रै गाह्रो हुन्छ ? हुन्छ भने सावधान रहनुस लागेको हुनसक्छ यो रोग
वि’वाह अघि अधिकाशं पुरुषले,बोल्ने यी झु’टहरु, तपाइले पनि बोल्नु भयो कि?